रामचन्द्र भट्ट , ७ भाद्र २०७८, सोमबार - जनै पूर्णिमाको दिन । सदाझैँ यसपटक पनि मैले जनै फेरेँ । अरू बेला मक्किएर चुँडिदा मात्र जनै फेर्दै आएको छु । तर जनै पूर्णिमाका दिन जनै फेर्नु मेरो वर्षको एक पटकको नियमित कार्य हुँदै आएको छ । जनै फेरेसँग ...
नेपालीहरुको पहिलो चाड जनैपूर्णिमा
हिमालय खबर , ६ भाद्र २०७८, आईतवार - हिन्दु पञ्चाङ्गअनुसार जनै पूर्णिमा श्रावणमास शुक्लपक्षको पूर्णचन्द्रका दिन पर्दछ । यो नेपालीहरुका निम्ति वर्षको पहिलो चाड हो । ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य जातिका लागि त यो सबैभन्दा महŒवपूर्णको चाड ...
बिटु केसी बराल , २ भाद्र २०७८, बुधबार - "डीसी जाने फ्लाइट छुट्यो भने केही सुर्ता नगर्नु , म ड्राइभ गरेर छ , सात घण्टामै पुर्याई हाल्छु । " बिहानको ब्रेकफाष्ट गर्नु अघि सुशील नेपालजीले यसो भनि रहँदा उहाँको बोलिमा किंचित ठट्टा थिएन बरु ज्यादै ...
कांग्रेसको पत्र र झाँक्रीको घर बँधाइ
अमृतनाथ सापकोटा , २८ श्रावण २०७८, बिहीबार - आउँदो अक्टोबरमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्टि्य समिति (आइसिसी) को नयाँ नेतृत्व चयन हुने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि संसारका ८० को हाराहारीमा रहेका देशहरूबाट प्रतिनिधिहरू चयन हुने निर्वाच ...
हिमालय खबर , ९ श्रावण २०७८, शनिबार - गुरु दुई ओटा अक्षरले बनेको एक पूर्ण शब्द हो । गु को अर्थ अन्धकार र रु को अर्थ प्रकाश हुन्छ । सिङ्गो शब्द गुरुले अन्धकारमा प्रकाश फैलाउने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । अन्धकाररुपी अज्ञानतामा प्रकाशरुपी ज्ञान ...
हिमालय खबर , ६ श्रावण २०७८, बुधबार - त्यसै कसैलाई छिःछि भन्ने रहर हुँदैन । त्यसका गतिविधिले उक्त शब्द उचारण गर्न बाध्य बनाउँछ । त्यस्तै भएको छ अहिले एनआरएनए जापानमा । हुन त हामी यतिबेला विश्वकै सभ्य मुलुकहरुमध्ये पर्ने जापानका छौँ । जह ...
प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र , ३ श्रावण २०७८, आईतवार - प्राचीनकालदेखि नै नेपाल उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकहरूका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वकै जिज्ञासुका लागि आकर्षक स्थल थियो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा प्रशस्त विदेशी तीर्थयात्री, विद्वान् तथा धर्मप ...
धनञ्जय ढकाल , १ श्रावण २०७८, शुक्रबार - प्रजातन्त्र भनेको केबल चुनाब मात्र हैन, यो एउटा दैनिक जीवन प्रक्रिया पनि हो । बहुमत प्राप्त समूहले अल्पमत समूहको हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै उनीहरुमाथि गरिने शासन व्यवसस्था नै प्रजातन्त्र हाे । अमेरि ...
बिशाल शर्मा , २९ असार २०७८, मंगलवार - शुक्रबारको साँझ ७ बजे तिर खाना खाएर एकछिन् टिभी हेर्दै थिएँ, मेरा आँखा झ्याप झ्याप निद्राले बटारिन थाले। 'जाउ बिशाल जाउ ! ८ बजिसक्यो सुत्न जाउ !' मेरो बहिनीले मलाई जिस्काउन थाली । नानीदेखि लागेको ...
मिलेर जाऔं, एनआरएनए अमेरिकालाई विवाद मुक्त संस्था वनाऔं
कृष्ण लामिछाने , १८ असार २०७८, शुक्रबार - अमेरिका- एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको नेतृत्वका लागि गत निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा केही भोट अन्तरले दोस्रो स्थानमा रहेका कृष्ण लामिछानले एनआरएनए अमेरिकालाई विवादवाट भुक्त गरी नेपाली समुदायको सांझा संस्थाका र ...
प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र , १८ असार २०७८, शुक्रबार - उत्तराधिकारीको कामकारबाहीबाट पूर्वाधिकारीको मूल्याङुकन हुने गरेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको काम गराइबाट पूर्वसरकारको महत्ता बढुने वा घटुने अवस्था देखिन्छ । हिजो राणा शासकले शासन गर्दा होसु अथवा पञ्च ...
बिशाल शर्मा , ११ असार २०७८, शुक्रबार - बिशाल चिया पिउन आउ, ब्रेकफास्ट तयार भयो है । माईजु किचन बाट मलाई बोलाउदै हुनुहुन्थ्यो, हस म आइहाले ! हाम्रो घरमा हामी प्राय जस्तो बिहान बिहान सधैं नेपाली समाचार हेर्ने गर्छौ । फ्रेश भएर किचनमा जादै ...
एनआरअन अमेरिकामा सधै किन विवाद ?
सागर अर्याल , १० असार २०७८, बिहीबार - सानो छँदा देखि नै सामान्य ज्ञानमा सोधिने गरेको प्रश्न थियो सपनाको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ ? उत्तर थियो अमेरिका। आज म त्यहि सपनाको देशमा छु। अझ भन्नु पर्दा मेरो कर्मभूमि सपनाको देश अमेरिका बनेको ...
रामचन्द्र भट्ट , ६ असार २०७८, आईतवार - हुनत ठाँटी खोल्चा हुँदै आवत­ जावत गर्नुपर्ने वाध्यता थिएन मेरा लागि । नजिकको बजार बट्टार पुग्न यात बसमै चढिन्थ्यो । कि भने सडकै सडक हिँडेरै पुगिन्थ्यो । ठाँटी खोल्चा मेरा लागि त्यतिखेर एक खालको त ...